ट्याक्सी दुनियाँ- फिचर - कान्तिपुर समाचार
बिहान झिसमिसेमा कुश्मा बजारको सडक सुनसान थियो । हामी निकै हतारमा थियौं । ट्याक्सीको खोजीमा चोकतिर पाइला छिटो–छिटो चालिरहेका थियौं । बाक्लो तुँवालोलाई मन्द हेडलाइटले चिर्दै परबाट सेतो कार हामीतिरै आयो । भाग्यवश ट्याक्सी नै रहेछ ।
‘नौ डाँडा जानुहुन्छ भाइ ?’ टीकाजीले सोधे ।
‘जान हुन्छ’, हँसिला चालकले सुरुमै ठट्टा गरे ।
‘कति लिने ?’
‘बढ्ता भो नि, पन्ध्र सय गरौं न ।’
उनले ट्याक्सी टुइँक्क मोडे । किनारा लगाए । हामी गएर ढोका तान्यौं । खुलेन । उनले ढोका होइन, सिसा मात्र खोले । हामीसँग नबोली मोबाइल थिचे ।
‘भेना, दुई जना छ, नौ डाँडा लैजाऊँ ?’
‘कति दिने भन्छ ?’ ह्यान्ड्स फ्री गरेको नभए पनि उनको मोबाइलमा उताबाट बोलेको टड्कारै सुनिन्थ्यो ।
‘पन्ध्र सय,’ उनले भने ।
‘चोकमा पोखरासम्म जाने अर्को एक जना पायो भने हालेर लैजा,’ उताबाट उत्तर आयो, ‘नभए जा । फर्किंदा उता मान्छे पाउँछ ।’
बल्ल उनले ढोका खुल्ने बनाइदिए ।
चोकमा लाम लागेका ट्याक्सी थिए । त्यहीं बार्गेनिङ गर्दै उभिइरहेका एक यात्रुछेउ रोकेर उनले भने, ‘पोखरा जाने हो ? एक सिट खाली छ ।’
ती व्यक्ति आएर चालक छेउको खाली सिटमा बसिगए । ती यात्रुले मोलतोल गर्दै गरेको ट्याक्सीका चालक भने रिसले आगो हुँदै ढोकामा आए ।
‘नरिसाऊ सोल्टी, हतार छ, टिपेर गएँ है’, उनले मुस्कानसहित फकाए । उत्तर आइनसक्दै हुइँकिइसके ।
पर्वतको पर्वते बाटो, मध्यम गतिमा गाडी गुडिरहेको थियो । धरतीमा क्रमश: उज्यालो बढ्दै थियो । सिसा टप्प लाउँदा पनि बाहिरको चिसोले मुटुसम्म धक्का दिइरहेको थियो ।
‘ट्याक्सी भेनाको हो भाइ ?’ मैले मौनता तोडें ।
‘हो सर’ उनले भने ।
‘भेनालाई एक जना थपें भन्दैनौ होला है ?’ मैले जिस्क्याएँ ।
‘त्यस्तो बेइमान छैन सर म,’ उनले मुन्टो पछाडि फर्काए ।
‘यो गाडी लिएर संसारै घुमियो नि,’ उनले प्रसंग बदले, ‘अस्ति भर्खरै गोरखपुर (भारत) रिजर्ब गएँ ।’
‘गोरखपुर गएको कति पैसा लिन्छौ ?’
‘त्यो त भेनाले लियो,’ उनले भने, ‘मलाई जा भन्यो, गएँ ।’
‘भेनाले तिमीलाई चाहिँ तलब दिन्छन् ?’
‘दिंदैन सर ।’
‘अनि फोगटमा कुदाउँछौं गाडी ?’
‘बैंकमा हालिदिन्छ नि ।’
‘मेरो एउटा ट्याक्सी चालक साथी छ,’ अनि, उनी भन्नुभन्दा पहिल्यै गाडी बत्याउने गरी हाँस्न थाले ।
‘भन न, पछि हाँस्नु,’ मैले भनें, ‘अगाडि बाटो पनि हेर ।’
‘ऊ भन्छ— ड्राइभरर्स लाइफ इज गुड लाइफ एभ्री टर्निङ एभ्री वाइफ,’ उनले भने, ‘कस्तो बदमास ?’
‘तिमी पनि त्यस्तै हौ कि क्या हो ?’
‘मा कसम सर, मलाई त यस्तो कुरा मनै पर्दैन,’ उनले खित्का छाड्न रोकेनन्, ‘साला त्यो त एक नम्बरको फटाहा नै हो ।’
‘एक दिन मेरो ट्याक्सीमा,’ उनी हौसिएर एउटा घटना सुनाउन थाले, ‘दुई जना आए, एउटा केटा, एउटा केटी ।’
‘बेनी जाऔं भने । बूढाबूढीजस्तो लाग्यो । उनीहरू पछाडि बसे ।’
‘उनीहरू चल्न, जिस्किन र मनपरी गर्न थाले । मेरा आँखा मिररबाट त्यतै पर्थे । कतै ट्राफिक देख्न पाए अगाडि ठ्याक्कै रोकेर देखाइदिन मन थियो । त्यति लामो बाटोमा त्यही दिनचाहिँ एक जना पनि पुलिस भेटिएन ।’
उनी भन्दै गए, ‘बेनी पुगेर उत्रिए । त्यहीं नजिकै मेरो छेमाको पसल थियो । म त्यहीं चिया खाएर बसें । उनीहरू पनि त्यतै आए । एक छिनमा त झगडा पो गर्न थाले । केटाले तेरो बूढालाई फोन गरिदिऊँ भन्दै धम्क्याउन थाल्यो । फर्किएर कुश्मा नै जा भन्दै लछारपछार गर्दै थियो ।’
‘कसैले पैसा नदिई ठगेको छैन तिमीलाई ?’ मैले प्रसंग बदलें ।
‘साँच्चै भनूँ ?’ उनले अड्को राखे ।
‘झूटो भन्छौ भनेर म सोध्छु र ?’
‘हाहाहाहाहा,’ पहिलो उत्तर त हाँसेरै टारे ।
‘ब्याड लक सर’, अनि जोडे, ‘आजसम्म त्यस्तो कोही परेको छैन । मलाई त परोस्जस्तो लाग्छ । हामीजस्तालाई ठग्नेलाई ठूलाले उसरी नै ठगिदिन्छन् । मलाई त टेन्सनै छैन ।’
‘बेलुका यसो चिरिप्प त पार्छौ होला नि ?’ मैले फरक प्रश्न सोधें ।
‘छ्या–छ्या–छ्या,’ उनले भने, ‘मलाई रक्सीको गन्धै मन पर्दैन ।’
त्यसमा पनि उनले एउटा घटनै सुनाए, ‘बुटवल छेउ । हाइवेको पसलमा एकपल्ट पानी खान मागें । भरि गिलास दिए । ठुस्स गनायो । कलको पानी यस्तै होला भनेर स्वाट्टै खाएँ । मलाई त फनन्नै घुमायो नि ।’
‘के गरेको यो भनेर सोधेको त, सबै गाडीवालाले यसलाई पानी भनेरै माग्छन् पो भन्छ,’ उनी फेरि हाँसे, ‘त्यहीं ओछ्यान मागेर चार घण्टा सुतें । बल्ल हिंड्न सकें ।’
उनका कथा सुन्दासुन्दै नौडाँडा आइपुगियो ।
‘तिम्रो नाम के हो भाइ ?’ झर्दाझर्दै मैले सोधें ।
‘सरिफ अन्सारी ।’
‘धेरै गफ गरें,’ पैसा समाउँदै अप्ठ्यारो मानेजस्तो पनि गरे, ‘मनमा पापचाहिँ छैन है सर मेरो ।’
भोलिपल्ट पोखराबाट काठमाडौं उड्नु थियो । बिहान ९:२० को टिकट थियो । हल्लन चोकमा मलाई ट्याक्सी चढाउन उनै टीकाजी गए । किनारामा लस्करै ट्याक्सी थिए । सबैभन्दा अगाडिको चालकले हात तान्दै सोधे, ‘दाइ कहाँ जाने ।’
‘एयरपोर्ट’, टीकाजीले भने ।
‘बस्नुहोस्’, उनले ढोका खोलिदिए ।
‘तीन सय ।’
‘मिटरमा नजाने ?’ मैले सोधें ।
‘पोखरामा पनि मिटरमा गएर पोसाउँछ र ?’ उनले अलि बाउँठे उत्तर दिए ।
‘यहाँ पालोअनुसार जानुपर्छ दाइ’, त्यतिन्जेल मलाई तीन जना चालकले घेरिसकेका थिए ।
‘कुनको पालो हो त अहिले ?’ मैले सोधें ।
जसले पनि आफ्नै ट्याक्सीतिर देखाउँथ्यो ।
‘तपाईंचाहिँ कतिमा लाने ?’ अर्कालाई सोधें ।
‘जुनमा गए पनि पैसा त उही हो,’ सबैले भने, ‘तीन सय ।’
तीन सय तिर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा महाभारत परेको कुरो थियो, कुन ट्याक्सीमा जानु ? एउटामा गए बाँकीले कुट्लान्जत्तिकै वातावरण थियो ।
त्यही बेला परबाट अर्को ट्याक्सी आयो । अघि बढेर टीकाजीले हात देखाए । रोकियो ।
‘एयरपोर्ट कतिमा लाने ?’ उनले सोधे ।
‘दुई सय पचास,’ चालकले भने ।
म त्यसमै चढें ।
सबै चालकले त्यो ट्याक्सी घेरे, ‘तँ भाउ बिगार्ने ?’
‘कसले राखिदिएको भाउ हो ? सरकारले हो ?’ ती चालक पनि कड्किए, ‘जति पायो त्यति पैसा मागेर भाउ भन्ने ?’
उनीहरू रोक्न खोज्दै थिए, उनले किचौंलाझै गरेर हुइँक्याइहाले ।
‘फटाहाहरू जे पायो त्यही गर्छन् । ग्राहकलाई मीठो बोलीले कन्भिन्स गरेर लानु छैन । घेरेर राख्छन्’, ट्याक्सी चलाउँदै उनी एक्लै बर्बराइरहेका थिए, ‘टुरिस्टलाई ठग्न पल्किएर नेपालीलाई पनि ठग्न खोजेका ।’
‘टुरिस्ट भनेको बिरालोले बाटो काटेजस्ता हुन्, चट्ट काट्छन्, हराउँछन् । नेपाली भनेका सधैं भेट हुन्छन् । राम्रो वचन गर्‍यो भने फेरि–फेरि उसैलाई खोज्छन्,’ उनको एकालाप रोकिएन, ‘रेट भन्छन्, केको रेट ? मिटरमा जानु हो भने सय रुपैयाँ उठ्दैन । दुई सय पचास पनि धेर हो । खुसी पारेर पो लिनुपर्‍यो नि ।’
विमानस्थल पुगुन्जेल उनी बोले, म चुप रहें ।
यो यात्रामा ट्याक्सी संयोग रोचकै रह्यो । सुरुमा काठमाडौंबाट पोखरा उड्ने ‘एयरपोर्ट टाइम’ हुन लाग्दा म ठिमी चौकमै थिएँ । कोटेश्वरको सम्भावित जाम छिचोल्नु थियो । बेलामा पुग्न सक्ने/नसक्ने अन्योल थियो ।
शंखधरचोकको डिलमुनि लस्करै ट्याक्सी थिए । सबै चालक एकै ठाउँ गफ चुटिरहेका थिए । मलाई देख्नासाथ सोधे, ‘कहाँ जाने ?’
‘एयरपोर्ट,’ मैले भनें ।
‘अहँ, नजाने,’ सबैले एकै मुखले भने ।
ट्याक्सी नभई पुग्ने उपाय नै थिएन । मसँग आग्रह गर्नुको विकल्प रहेन ।
‘जति माग्नुहुन्छ, दिन्छु,’ मैले भनें, ‘एक जना जो भए पनि जाऊँ न ।’
उनीहरूले अलि पछाडिको ट्याक्सी देखाइदिए ।
‘कहाँ जाने ?’ उही प्रश्न आयो ।
‘एयरपोर्ट,’ उत्तर सुन्नासाथ सिसा लगाउँदै नबोली उनी अघि बढे ।
अचम्म लाग्यो, ‘एयरपोर्ट’ जान किन मान्दैनन् ? काठमाडौंका ट्याक्सीमा प्रहरीले मिटर अनिवार्य गरेको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ । मलाई मिटरमा पैसा तिर्न होइन, अब त जति तिरेर भए पनि बेलामा पुग्न बढ्ता जरुरी थियो ।
‘मिटरमा सोच्नुभयो होला, पर्दैन,’ मैले अर्कालाई आग्रह गरें, ‘जति लिनुहुन्छ, दिन्छु ।’
उनले माथिदेखि तलसम्म हेरे । अनि, इन्कार गरे, ‘मेरो अन्तै जानु छ ।’ सायद तिनीहरूले मलाई प्रहरी वा कुनै अधिकारी ठाने, जसले विमानस्थल जाने नाममा अनुसन्धान गरिरहेको छ । वा, उनीहरू अन्य केही कारणले विमानस्थल जान मान्दैनन् ।
समय गुडिरहेको थियो, ट्याक्सी गुडाउनै सकिएन ।
झन्डै १५ मिनेट फोगटमा गइसक्यो । एकपछि अर्कालाई बिन्ती गर्दै गएँ । भाग्यवश, निकै नियालेपछि एक चालकले भने, ‘पाँच सय लाग्छ ।’
‘जाऊँ,’ म त यति खुसी भएँ, मानौं अति दुर्लभ कुरा भेट्टाएँ ।
‘ट्याक्सी आफ्नै हो, भाइ ?’ बाटोकटनी सोधिदिएँ ।
‘दिनको कति तिर्नुपर्छ ?’
‘त्यत्रो तिर्नुभन्दा आफैं किन्नु नि ।’
‘अब विचार गर्दै छु सर,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडितका नाममा आउने ट्याक्सी अब हामीले किन्ने त हो ।’
‘हँ ?’ कुरो सुन्दा अचम्म लाग्यो । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि १ हजार ५ सयवटा ट्याक्सी नम्बर गोला प्रथाबाट दिँदै छ । केही महिनाअघि यसको आवेदन माग्दा करिब १ लाख ५० हजार (सय गुणा) बढीले फारम भरेर बुझाएका थिए । यही चैतभित्र भाग्यशाली छान्ने सरकारले भनेको थियो, चुनावका कारण भर्खरै जेठमा सारेको छ ।
‘त्यो ट्याक्सी अब हामीले त किन्न हो,’ उनले दोहोर्‍याए ।
‘भाग्यले परेको ट्याक्सी कसले बेच्छ होला र ?’
‘के कुरा गर्नुभएको ? सबैजसोले बेच्ने नै हुन् ।’
‘सरकारले नम्बर दिने हो, ट्याक्सी दिने होइन । ट्याक्सी किन्ने पैसा भूकम्पपीडितसँग कहाँबाट होस् ? बैंकबाट निकाल्नु हो भने आधा आफैं हाल्नुपर्ने नियम आइसक्यो । बरु नम्बरै बेच्छन्, अलिकति पैसा लिन्छन्, घर बनाउँछन् ।’
‘कतिमा पाइन्छ त नम्बर ?’
‘५–६ लाखसम्म त मै हाल्छु । तर अहिल्यै यसमा बिचौलिया कीरासरि भइसके । जसलाई पर्छ, तिनले ३–४ लाखभन्दा धेरै नपाउलान् । बिचौलियाले झ्याप्पै खाइदिन्छन् ।’
‘तिमी त बिचौलिया होइन नि ?’
‘होइन सर, मलाई त्यो त मनै पर्दैन । बिचौलिया भएर मान्छे विदेश पठाएको भए अहिलेसम्म करोडपति भइसक्थें । यसरी ट्याक्सी हल्लाएर बस्नुपथ्र्यो र ?’
ट्याक्सी कोटेश्वरको जाममा फस्यो । ‘एयरपोर्टबाट फर्किंदा प्यासेन्जर पाउँछौ होला नि ?’ मैले अर्कै प्रसंगको प्रश्न गरें ।
‘कहाँ पाउनु सर,’ उनले भने, ‘देख्नुहुन्न तानातान ? एउटा टुरिस्ट देख्यो भने चारतिरबाट चारै हात–खुट्टा तान्छन् । पुलिस चुप लागेर हेरिरहन्छ ।’
‘तिमीचाहिँ कान तान्छौ कि ?’ मैले ठट्टा गरें ।
‘हाहाहाहा...,’ उनी दिल खोलेर हाँसे, ‘म त बरु आफ्नै कान समाउँछु, त्यस्तो गर्दिनँ । बेइज्जत ।’
‘अनि कसरी कमाउँछौ त ?’
‘हजुरहरूजस्ता प्यासेन्जर पाए खुसी पार्‍यो, टिप्स आउँछ,’ उनी त ख्यालख्यालमा चिप्लो पो घस्न थाले, ‘दुई–तीन टिप गर्न पाए पुगिहाल्छ । गति छाड्नै पर्दैन ।’
विमानस्थल पुग्दा जहाजको उड्न लेखिएको समय भइसकेको थियो ।
‘सर,’ हतारिएर झर्दै गर्दा उनले भने, ‘लामो जाममा पर्‍यो । ५० रुपैयाँ थपिदिनुभएन भने त घाटै लाग्छ ।’
बोल्ने फुर्सदै थिएन । मागेजति थमाएर दौडिएँ । भित्र बोर्डिङ पास दिन बन्द भइसकेको रहेछ । उडान समय नजिकिइरहेको थियो । जहाज कम्पनीका कर्मचारीलाई आग्रह गरेपछि धन्न मिलाइदिए । छुट्टै भ्यानमा राखेर जहाजसम्म पुर्‍याइदिए ।
र त सरिफजस्ता सरिफ चालकसँग भेट्न जुर्‍यो ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७४ १०:१७
सपना र विपनाको माखेसाङ्लो
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग छ । यही रेमिट्यान्ससँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार र आप्रवासनले नेपाली समाजमा झट्ट हेर्दा धेरै ‘सकारात्मक’ नतिजा मात्रै दिएको हो कि झैं देखिन्छ । तर यथार्थ यत्तिमा सीमित छैन । नेपाली समाज, घर–परिवार र सामाजिक मनोदशाका बारेमा माइग्रेसन विषयमा जोडिएर लेखिएका दुई उपन्यास ‘रेमिटल्यान्ड’ र ‘मुदिर’ ले दिन चाहेको सन्देश :
वैशाख २, २०७४ देवेन्द्र भट्टराई
झापाली पवित्र नदीहरू माई अथवा रतुवाको आसपासमा बस्ने गाउँलेजनले एउटा थेगो बनाएका छन्— बाँचुन्जेल पुलमाथि, मरेसि पुलमुनि ।
भाङबारीकी रुक्मिणी रिमाल
माईखोलाको आडैमा हरेक वर्ष माईमेला लाग्छ । रतुवाको आडैमा टीकाबजार उत्सव बनेर आउँछ । विदेशबाट अझ भनौं, खाडी–मलेसिया पुगेर छोटो छुट्टीमा घर फिरेका युवायुवतीको चमक ती मेलाहरूमा खुबै देखिन्छ । माई अथवा रतुवा खोलाको पुलमाथि हुँदै अघि बढिरहेको दोहोरीलत्तामा परैबाट छुट्टिन सक्छ— रेमिटल्यान्डमा भर्खरै फिरेका पाइलाहरू ।
यो सदृश्य नजिकैबाट नियालेर बसिरहेका विकासकर्मी श्याम सिंघकले दमक, पशुहाट छेवैमा सुकुम्बासी बस्तीका रुद्रमान मगरको ‘शवको बाकस’ खाडी मुलुकबाट फर्किएको पनि देखे । गाउँबस्ती खाली हुने गरी परदेशी बनिरहेका युवायुवतीमध्ये कतिले घरको छानो फेरेका छन् अथवा कतिले जग्गा–मोटरसाइकल खरिदेका छन् ? कति ऋणबाट मुक्त भएका छन् अथवा को–कति थप ऋणी बनेका छन् भन्ने हिसाबकिताबको त्यति गणना नहुँदो रहेछ । बरु हिजोसम्म रतुवा र माइको पुलमाथि जीवन–जगत्का कुरा किच्दै हिँडिरहेको एउटा पात्र यही रेमिट–तिर्सनाका कारण अनाहकमा पुलमुनि (चिता) मा पुगेको यथार्थले भने सामाजिक शृंखलालाई थप ‘विशृंखल’ बनाउने रहेछ । समाजले खिलसरी सम्झिराख्ने ठूलो चोट पनि यही हुने रहेछ । यही सारभूत अर्थमा कथिएको रहेछ— बाँचुन्जेल पुलमाथि, मरेसि पुलमुनि ।
लेखक श्याम सिंघक यही अर्थमा बढी भुक्तभोगी बनेका छन्— रेमिटल्यान्डमा । खाडी मुलुकमा वर्षौंवर्ष श्रम–पसिना बहाएर घर फिर्दा घरकी जहानले ढोकैमा ‘अलबिदा’ लेख्दै अर्कैतिर गैसकेको दृश्यहरू साझा र सनातनी भैसकेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा अलिक पर्तिर केर्खा र झिलझिलेतिर, हसनदह र ढुकुरपानीका भित्री गाउँबस्तीमा सिंघकले वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको अनौठो सामाजिक विचलनहरू देखे । स्थानीय भेगमा विकासकर्मी भएर कुदिरहेका बेला ‘रेमिट’ का कारण समाजमा नैतिक र अनैतिक अर्थ–परिभाषाहरू क्रमश: खुम्चिँदै गएको सिंघकले भेटे ।
झापाली कर्मभूमिमा संघर्षरत लेखक श्याम सिंघक कहिल्यै विदेश गएनन् । अझ विदेशमा पनि खाडी मुलुक र श्रम–पसिनाले भरिएको जगत्मा उनी कहिल्यै पुगेनन् । यो अवस्थाको लेखाइमा कल्पनाशील र उडन्ते बन्ने सम्भावना लेखक सिंघकसँग प्रशस्तै थियो । तर, साउदीको ग्यास कम्पनीको वृत्तान्त होस् अथवा खाडीको एक भिल्लाअगाडि एउटा रुप्पी (चरो) देखिएको दिनमा पलाएको खुसीको संकेत होस्— उनले हुबहु उतारेका छन् । यतिसम्म कि रेगिस्तानमा फैलिएका खजुरका रूख हेरेर गाउँले केराघारी कल्पेको भावना–संवेदनाको यथार्थ त्यो बेहोर्ने (भोग्ने) लाई मात्रै थाहा हुन्छ । मानौं— सिंघक पनि खाडी गएर खजुरको बोटमुनि बसेका छन्जस्तो दृश्य पुस्तकमा छ ।
झन्डै ‘घरघरकी कहानी’ जस्तो भैसकेको रेमिट–गाथामा एउटै व्यक्ति र पात्रमा अध्याय–अध्याय प्रेमलीला (अथवा कहिलेकाहीं त्योभन्दा माथि) को वृत्तान्त लुकेको हुन्छ । यो ओपन–सेक्रेट सामाजिक विम्ब हो, रुक्मिणी अथवा मुक्साम र फुङ्सा यी नाम अस्तित्वको संघर्ष (स्ट्रगल फर एक्जिटेन्स) का प्रतिनिधि नाम हुन् जो अहिले सिंघकको ‘रेमिटल्यान्ड’ भरि छाएका छन् । तर, यी पात्रहरू नेपाली समाजमा यत्रतत्र सर्वत्र छन् । नारायण, नयराजजस्ता ‘उतप्रेरक’ पात्रहरू नेपाली समाजमा जहींतहीं छन्, हुन सक्छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपाली समाज, राजनीति र अर्थनीतिको केन्द्रमा रहेको ‘रेमिट्यान्स’ ले धेरै घरका टिनका छाना फेरिएका छन्, गाउँघरमा बाहिरबाट हेर्दाको रामरमाइलो थपिएको छ । तर समाज र घरपरिवारभित्रको चित्र–चरित्र, मानवीय संवेदना र अपनत्व भने पूरै खजमजिएको छ । यही कारण आपसी सम्बन्ध र साइनो सक्दो सन्देहको घेरामा पर्न थालेको छ । तैपनि समाज र घरपरिवार भने कुनै मनी–ट्रान्सफरको ढोकामा उभिएर रेमिटको मीठो गफ गर्न र सुन्नमै अभ्यस्त भैसकेको छ— अम्मलझैं ।
वैदेशिक रोजगारीमा खाडीभूमि (साउदी) पुगेर ९ वर्ष बिताएको त्यो सपनामुखी पात्र बुटवलको यमनाथ चापागाई पनि हुन सक्छ । अथवा, इलामको दावा शेर्पा । दमक, भाङबारीकी रुक्मिणी रिमाल नेपाली समाजको मनोवृत्ति र आम मनोविज्ञानमा जोडिएकी यस्ती पात्र हो जो यसरी सहजै घटनामा बुन्नलाई र कथामा कथ्नलाई सजिलो छ । तर, यथार्थ भने यत्ति मात्रै छैन, हुँदैन । ‘रेमिटल्यान्ड’ मा रुक्मिणीको कथा किन सजिलो लाग्यो भने हरेक घटनाक्रममा महिलालाई देखाउन, चित्रित गर्न र महिलामाथि मनोविनोद कथ्न धेरै सजिलो छ— कम्तीमा नेपाली परिप्रेक्ष्यमा । सपनामा मलजल गर्न खाडी मुलुक पुगेको एउटा पुरुष (श्रीमान्) र सपना साकार भएको कल्पेर यता घरमै बसिरहेकी महिला (श्रीमती) दुवैको मनोदशा उही–उस्तै छ— ‘तावाबाट भुङ्ग्रो’ मनोदशा । को तावा, को भुङ्ग्रो— खुट्याउन मुस्किल छ ।
यो मनोदशाले सामाजिक, आर्थिक मात्रै होइन, यौन मनोविज्ञानसम्मका घटनाक्रमलाई स्वभावत: निम्त्याउँछ नै । उपन्यासकार श्याम सिंघकले ‘रेमिटल्यान्ड’ मा रुक्मिणी पात्र–संयोजनलाई अलिक बढी फिल्मी बनाएका हुन् कि झैं लाग्छ । जंगलमा गएर फोटो सेसन गर्ने, हिले माछा पक्रने, सिंगो बगैंचा बनाउने (ताजमहल शैलीमा) अथवा भमरा–फूल–परागशेचनको (शिरीषको फूल) समानअर्थी संवादलाई दोहोर्‍याउँदा लेखक सिंघकले यति मौलिक विषयमा कथन–कथ्यको मिसावट खोजेको झल्को मिल्छ । तर, ‘स्लो पोइजन’ बन्दै गएको रेमिट्यान्सको सिंगो पद्धति–प्रक्रियामा जहाँ जे भन्नुपर्ने हो, त्यो भने सिंघकले भनेका छन्— ठाडो शैली भए पनि । साउदीको दमाममा रहेको ग्यास प्लान्टको छेवैमा बसेर परदेसिएको पात्रले सुनाएको मनोवादको अंशजस्तै— ‘अचम्म लाग्छ, हाम्रा देशका विद्वान्हरू ‘विदेश नजाऊ’ को नारा घन्काइरहन्छन् । भन्छन्— पाखुरी बजारे यहाँ सुन फलाउन सकिन्छ अरे ! फलाउँदैनन् सुन उनीहरू । बरु डीभी र पीआर लिएर बसाइँ हिंड्छन् राष्ट्रियता नै त्यागेर । बरु हामी फर्केर आउँछौं, त्याग्दैनौं राष्ट्रियता ।’
समाजमा जोडिएको कथा बुनिरहेका बेला आ–आफ्ना आग्रह/पूर्वाग्रह स्वभावत: हुन्छन् नै । कतिपय पात्रको आसक्ति वा विरक्तिमा पनि यस्तो संकेत देखिन सक्छ । खाडीमा ९ वर्ष रोजगारी गरेर श्रम–पसिनाको विपनामा पौडिँदै घर फिरेको एउटा पात्र (मुक्साम) घर फिर्दा जहान (फुङ्सा) अरूतिरै गैसकेको विरक्तिमा कथिएको ‘लिंक’ कतिपय अर्थमा आग्रहयुक्त देखिन सक्छ । ‘फुङ्साले छाडेपछि मैले नयाँ गरी जिउने विचार गरें । बिलकुल नयाँ । नयाँ काम, नयाँ जीवनशैली । नयाँ धार्मिक आस्था । मैले दमकको पवित्र मण्डलीमा सदस्यता लिएँ’ भन्दै मरुभूमिको बीच विन्दुमा हराइरहेको एउटा पात्रले एकाएक दर्गादिशा लेखिएको होर्डिङबोर्ड भेटेजस्तो चित्रण उपन्यासमा जसरी गरिएको छ, यसले गम्भीर विषयवस्तुलाई एकाएक सतही बनाएको छ । लेखक सिंघक स्वयम्को आस्थाले एउटा गम्भीर विषय र जिम्मेवार पात्रलाई यो ‘आग्रह’ मा बाँधेको हुन सक्छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत अंश रेमिट्यान्सले बेहोरेको र योभन्दा बढी सामाजिक सतहमा ‘देखासिकी’ को उपाय बनेको वैदेशिक रोजगारीसँग गाँसिएका कथा–उपकथाहरू एक होइन, अनेक छन् । एक महिनाअघि मात्रै, पूर्वी पहाडी जिल्लाको एउटा गाउँमा आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएको वर्षौ भैसके पनि श्रीमती दुई जीउकी बनेपछि गाउँमा छाएको तरंगको समाचार उस्तै अनौठो थियो । पछि गरिएको अनुसन्धानमा ती महिलाले एकैचोटि घरगाउँका ५ जना युवालाई आफ्ना सहयात्रुका रूपमा (सामूहिक होइन) ‘किटानी जाहेरी’ मा नाम दिएपछि रेमिट्यान्स–रेमिटल्यान्डको अर्को विशादपूर्ण स्थिति उब्जिएको थियो । यो नैतिक–अनैतिक पराकाष्ठाको चित्रलाई सिंघकले उपन्यास ‘रेमिटल्यान्ड’ मा हुबहु उतारेका छन् ।
श्यामले नेपाली आख्यान लेखनको सन्दर्भमा (सायदै पहिलोपटक) हुबहु प्लट–पृष्ठभूमिलाई सजीव व्याख्यानमा उतारेका छन् । जस्तो रुक्मिणी रिमालको थातथलोको बारेमा उनले भनेका छन्, हुबहु दमक नगरको नक्सामा जस्तै— ‘ढुकुरपानीको तल्लो छेउमा म उभिएको छु । यसभन्दा तल दमक बजार सुरु भएर पूर्व र दक्षिणतिर फैलिएको छ । पश्चिममा भने बजारको समानान्तर रहँदै चियाबगान लम्केको छ । बजार र चियाबगानको मध्यबाट राजमार्ग छिरेको छ । झापा जिल्लाको उत्तरपूर्वमा रहेको यही भूगोललाई अहिले दमक भनिन्छ ।’